Computer Technical Notes & Sharing Softwares: ယူ​နီ​ကုဒ်​ကြောင့် မြန်မာ​စာ စာလုံးပေါင်း​သတ်ပုံ စစ်​လို့​ရ​ပြီ
ယူ​နီ​ကုဒ်​ကြောင့် မြန်မာ​စာ စာလုံးပေါင်း​သတ်ပုံ စစ်​လို့​ရ​ပြီ
မြန်မာ​အိုင်​တီ​ပ​ရို​အပါ​အ၀င် အဓိက Web Site တော်တော်​များ​များ ယူ​နီ​ကုဒ်​စနစ်​ကို ပြောင်းလဲ​ခဲ့​ကြ​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဘာ​ကြောင့် ပြောင်း​ရ​တာ​လဲ? မြန်မာ​စာ​ကို နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​အဆင့်​အဖြစ် မြှင့်​တင်​နိုင်​ဖို့​ပါ။ အခု​ချိန်​မှာ ကွန်​ပြူ​တာ​သုံး​မြန်မာ​စာ​ရဲ့​အဆင့်​အတန်း​ဟာ နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​ကို​မ​ဆို​ထား​နဲ့ အိမ်နီးချင်း​နိုင်ငံ​တွေ​နဲ့​တောင်​မှ နှိုင်းယှဉ်​လို့​မ​ရအောင် နိမ့်​ကျနေ​ပါ​သေး​တယ်။
ဘာ​ကြောင့်​နိမ့်​ကျ​ရ​တာ​လည်း​ဆို​တော့ နိုင်ငံ​တစ်​ကာ စံ​ချိန်​စံ​ညွှန်း​နဲ့​ကိုက်​ညီ​တဲ့ စနစ်​တွေ​ကို အသုံး​မ​ပြု​ခဲ့​တဲ့​အတွက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဒီ​လို​မျိုး စံ​နဲ့​မ​ညီ​တာ​တွေ​ကို​သုံး​ခဲ့​တော့ ဘယ် Software က​မှ မြန်မာ​စာ​ကို စာလုံးပေါင်း​သတ်ပုံ စစ်​မ​ပေး​နိုင်​ခဲ့​ပါ​ဘူး။ မြန်မာ​စာ​ကို ဘာသာ​ပြန်​ပေး​နိုင်​တဲ့ ဘာသာ​ပြန်​စနစ် မ​ရှိ​ခဲ့​ပါ​ဘူး။ စနစ်​မ​ကျ​တဲ့​အတွက် ကွန်​ပြူ​တာ​က မြန်မာ​စာ​ကို နား​မ​လည်​ပါ​ဘူး။ ကွန်​ပြူ​တာ​က မြန်မာ​စာ​ကို နား​မ​လည်​တဲ့​အတွက် မ +ျ+ိ+ု+းလို့ ရိုက်​ထား​တဲ့ မျိုး​ကို မ +ိ+ျ+ု+းလို့​ရှာ​ရင် တွေ့​မှာ​မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ English စာ​မှာ​ဆို​ရင် Myo လို့​သိမ်းထား​ရင် myo နဲ့​ပြန်​ရှာ​လည်း တွေ့​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို​စံ​ချိန်​မ​မှီ​တဲ့ စနစ်​တွေ​ကို​သာ​ဆက်​သုံး​နေ​မယ်​ဆို​ရင် ဒါ​တွေ ဘယ်​တော့​မှ​ရ​လာ​မှာ​မဟုတ်​ပါ​ဘူး။
ဒါ​ဟာ ကျွန်တော်​တို့ ဘာ​ကြောင့် ယူ​နီ​ကုဒ်​စနစ်​ကို ပြောင်း​သုံး​ရ​ခြင်း​ရဲ့ အကြောင်းရင်း​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နိုင်ငံ​တကာ​စံ​ညွှန်း​ဖြစ်​တဲ့ Unicode Standard ကို လိုက်နာ​ထား​တဲ့​အတွက် ကျွန်တော်​တို့ မြန်မာ​စာ​လည်း နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​အဆင့်​ကို (တ​ဖြည်း​ဖြည်း) မြင့်​တက်​လာ​ခဲ့​ပြီ​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကွန်​ပြူ​တာ​က​လည်း မြန်မာ​စာ​ကို နားလည်​လာ​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
Web Site တွေ ယူ​နီ​ကုဒ်​စနစ် ပြောင်း​သုံး​ကြ​တော့ အခက်​အခဲ​တစ်​ချို့ တွေ့​လာ​ရ​ပါ​တယ်။ အချို့ Site တွေ​က ယူ​နီ​ကုဒ်​သုံး​ပြီး အချို့ Site တွေ​က ဇော်ဂျီ​ကို​ဆက်​သုံး​နေ​ကြ​ပါ​တယ်။
ဇော်​ဂျီ​သုံး​ထား​တဲ့ Site တွေ​ကို​ကြည့်​ရ​တော့ ယူ​နီ​ကုဒ်​သုံး​ထား​တဲ့ Site တွေ​ကို​ကြည့်​မ​ရ​တာ၊ ယူ​နီ​ကုဒ်​သုံး​ထား​တဲ့ Site တွေ​ကို​ကြည့်​ရ​တော့ ဇော်ဂျီ​သုံး​ထား​တဲ့ Site တွေ​ကို​ကြည့်​မ​ရ​တာ​မျိုး​တွေ ဖြစ်လာ​ပါ​တယ်။ ဒီ​ပြဿနာ​ကို​ဖြေ​ရှင်း​ဖို့​အတွက် Firefox Addon တစ်​ခု​ကို မိတ်​ဆက်​ပေး​ချင်​ပါ​တယ်။
သံလွင် က​ဖန်တီး​ပေး​ထား​တဲ့ Myanmar Converter Firefox Extension က အခု​ဖြစ်​နေ​တဲ့ ပြဿနာ​ကို ဖြေ​ရှင်း​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်။ အသေး​စိတ်​ကို သံလွင် Website မှာ သွား​ကြည့်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့ ဒီအဆင့်တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်သွားပါ။
၁.) Extension ကို Install လုပ်​ဖို့​အတွက် ဒီ Link ကို​နှိပ်​ပါ။
၂.) အောက်​မှာဖော်​ပြ​ထား​တဲ့ Confirmation ပေါ်​လာ​တဲ့​အခါ Allow ကို နှိပ်​ပေး​ပါ။
၃.) Extension ကို Install လုပ်​ပြီး​တဲ့​အခါ Firefox ကို Restart လုပ်​ပေး​ဖို့ လို​အပ်​ပါ​တယ်။
၄.) မြန်မာ​အိုင်​တီ​ပ​ရို​က ဟိုးအရင်က ဇော်ဂျီ ယူ​နီ​ကုဒ် ရော​နေ​တဲ့ Page တစ်​ခု နဲ့ စမ်း​ကြည့်ပါ​မယ်။
ကျွန်တော့်​စက်​မှာ ဇော်ဂျီ Font မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။ ရှိ​ရင်​လည်း မြန်မာ​အိုင်​တီ​ပ​ရို​မှာ Myanmar3 ကို အဓိက Font အနေ​နဲ့ သတ်​မှတ်ထား​တဲ့​အတွက် အဆင်​ပြေ​ပြေပေါ်​မှာ​မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ Page ကို Load လုပ်​လို​မ​ပြီး​ခင် ဒီ​လိုပေါ်​နေ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဒါ​ပေ​မယ့် Page ကို အပြည့်​အ၀ Load လုပ်​ပြီး​သွား​ချိန်​မှာ​တော့ ဇော်ဂျီ​နဲ့ ရေးထား​တဲ့ Text တွေ​ကို ယူ​နီ​ကုဒ်​အဖြစ် အလို​အလျှောက်​ပြောင်း​ပေး​သွား​တဲ့​အတွက် အဆင်​ပြေ​ပြေ မြင်​ရ​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဒီ Extension က Facebook, Gmail စ​တဲ့ Web Site တွေ​မှာ​ပါ အစဉ်​ပြေ​ပြေ အလုပ်​လုပ်​ပါ​တယ်။ သူများတွေ တစ်ချို့ကဇော်ဂျီနဲ့ တစ်ချို့က ယူနီကုဒ်နဲ့ အမျိုးမျိုးတင်နေတဲ့ Facebook Wall Status တွေအားလုံးကို မြင်ရပါပြီ။ Gmail မှာလည်း သူများတွေက ကိုယ့်ဆီကို ဘာနဲ့ပဲပို့ပို့ မြင်ရပါပြီ။ ဒါ​ကြောင့် ဇော်ဂျီ Font လုံး​၀​မ​လို​အပ်​တော့​ပါ​ဘူး။ သူ​များ​တွေ​ဘာ Font သုံး​ထား​ထား အဆင်​ပြေ​ပြေ မြင်​ရ​မှာ​ပါ။
စက်​ထဲ​မှာ ဇော်ဂျီ​နဲ့ ယူ​နီ​ကုဒ် နှစ်​မျိုးရှိ​နေ​ရင် တစ်​ခု​နဲ့​တစ်​ခု အပြန်​အလှန် "ညိ" နေ​တဲ့​အတွက် အချို့ ပြဿနာ​တွေ​ရှိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော်​ကတော့ မ​လို​အပ်​တော့​တဲ့ ဇော်ဂျီ​ကို လုံး​၀ ထုပ်​ပစ် (Uninstall) ဖို့ အကြံ​ပြု​ချင်​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော့် စက်​ထဲ​မှာ ဇော်ဂျီ Font လုံး​၀​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။ ဒါ​ပေ​မယ့် (ဒီ Extension ကြောင့်) စာ​အားလုံး​ကို ဖတ်​လို့ ရ​နေ​ပါ​တယ်။
ယူ​နီ​ကုဒ်​ဟာ Computable ဖြစ်​တဲ့​အတွက် ကွန်​ပြူ​တာ​နဲ့ Software တွေ​က နားလည်​ကြ​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော်​တို့​က အဲ့​ဒီ ယူ​နီ​ကုဒ်​စနစ် ပြောင်း​သုံး​လာ​တဲ့​အတွက် (အခြား​ဘာသာ​စကား​တွေ​လို) ဘာသာ​ပြန်​စနစ်​တွေ၊ စာလုံးပေါင်း​သတ်ပုံ​စစ်​တာ​တွေ စတင်​အကောင်အထည် ဖော်​နိုင်​လာ​ပြီ​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ မြန်မာ​စာ​ဟာ နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​အဆင့်​ကို ထိုး​ဖောက်​ရောက်​ရှိ​လာ​ခဲ့​ပါ​ပြီ။
စောစော​က ကျွန်တော်​တို့ Install လုပ်​ခဲ့​တဲ့ Extension မှာ သတ်ပုံ​စစ်​တဲ့ စနစ် တစ်ခါတည်း ပါလာ​ပါ​တယ်။ တစ်ခါတည်း စမ်းသပ်​ကြည့်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။
လက်​ရှိ​စာ​ရိုက်​နေ​တဲ့ Textarea ထဲ​မှာ Right Click နှိပ်​လိုက်​ရင် Context Menu ပေါ်​လာ​ပါ​တယ်။ အဲ့​ဒီ Menu ထဲ​က Check Spelling ဆို​တဲ့ Check ရဲ့​အောက်​မှာ Language ဆို​တဲ့ Submenu တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ့​ဒီ Submenu ထဲ​က Burmese/Myanmar ဆို​တဲ့ Option ကို​ရွေး​မယ်​ဆို​ရင် မြန်မာ​စာလုံးပေါင်း​သတ်ပုံ စတင်​စစ်ဆေး​နေ​ပြီ​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဒီ​စမ်းသပ်​မှု့​မှာ စာလုံးပေါင်း လေး​နေရာ မှား​နေ​ပါ​တယ်။ သတ်ပုံ​စစ်​တဲ့​စနစ်​က သုံး​နေရာ​ကို မှား​မှန်း​သိ​ပြီး လိုင်း​တား​ပေး​ထား​တာ​ကို တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ အဲ့​ဒီ​လိုင်း​အနီပေါ်​မှာ Right click လုပ်​မယ်​ဆို​ရင် ဖြစ်​နိုင်​ခြေ​ရှိ​တဲ့ စာလုံးပေါင်း အမှန်​တွေ​ကို ဖော်​ပြ​ပေး​ပါ​လိမ့်​မယ်။
အမှား​ထောက်​ပြ​နိုင်​ခြင်း​မ​ရှိ​တဲ့ စကား​စု "ဖြစ်​နေကျ" မှာ "ကျ" ဆို​တဲ့​စကားလုံး​ဟာ သူ​တစ်​လုံး​တည်း​ဆို​ရင် မှန်​နေ​တဲ့​အတွက် မှား​မှန်း စနစ်​က မ​သိ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ လက်​ရှိ​စနစ်​ဟာ စကားလုံး "တစ်​လုံး​ချင်း​စီ​ကို​ပဲ" စစ်​ပေး​နိုင်​ပါ​သေး​တယ်။ "စကား​စု" တွေ​ကို​တော့ မှန်​အောင် စစ်​မ​ပေး​နိုင်​သေး​ပါ​ဘူး။ လက်​ရှိ​မှာ စာလုံး​တစ်​လုံး​ချင်း​စီ​ကို​ပဲ မှန်​အောင်​မ​ရေး​နိုင်​သူ​တွေ အများ​ကြီး ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ့​ဒီ​လူ​တွေ​အတွက်​တော့ အထိုက်​အလျှောက် အသုံး​၀င်​မှာ​ပါ။
ဒါ​ဟာ အခု​မှ စလုံး​ရေ "စ" ယုံ​ပဲ​ရှိ​ပါ​သေး​တယ်။ အမှန်​တစ်​ကယ် ပြည့်စုံ​ကောင်းမွန်​တဲ့​စနစ်​တွေ ပေါ်ပေါက်​လာ​ဖို့​အတွက်​တော့ ဝိုင်းဝန်း တည်ဆောက်​ကြ​ရ​ဦး​မှာ​ပါ။ အဲ့​ဒီ​လို တည်ဆောက်​ဖို့​ကို ကျွန်တော်​တို့ Professional ရဲ့​တာ​၀န်​လို့​ပဲ ထား​လိုက်​ပါ။ အသုံးပြု​သူ​တွေ ယူ​နီ​ကုဒ်​ကို အသုံးပြု​ပေး​ခြင်း​ဖြင့်​ပဲ ကူညီ​ပေး​ကြ​စေ​လို​ပါ​တယ်။
အသုံးပြု​သူ​တွေ​က နိုင်ငံ​တကာ​စံ​ဖြစ်​တဲ့ ယူ​နီ​ကုဒ်​ကို သုံး​ပေး​မှ​သာ အခု​လို​အသုံး​၀င်​တဲ့​စနစ်​တွေ​ကို တည်ဆောက်​ပေး​လို​သူ​တွေ ဖန်တီး​တည်ဆောက်​ပေး​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါ​ကြောင်း....
Credit to http://www.myanmaritpro.com/profile/EiMaung ( ကိုအိမောင် @ Myanmaritpro.com)
Credit to http://www.myanmaritpro.com/profiles/blogs/1445004:BlogPost:232572 ( this blog)